Uhlaziyo lwe-Android 7.0 lwe-nougat lwe-samsung galaxy note 5 iqala ukufika e-europe
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat lwe-Samsung Galaxy Qaphela i-5 iqala ukufika eYurophu
Uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat lwe-Samsung Galaxy Qaphela i-5 iqala ukufika eYurophu
Inqaku le-5 leNqaku leNqaku le-5 luluhlu lwamva nje lwe-smartphone olufumanekayo kwintengiso, kwaye esinye sezixhobo i-Samsung ethathe isigqibo sokuyihlaziya kwi-Android 7.0 Nougat. Nangona kunjalo, le kuphela yesithathu ye-Samsung yokufumana uhlaziyo emva kweGPS S7 kunye neGPS S6 (kunye nazo zonke iiyantlukwano).
Kuba i-Galaxy Note 5 ibingafakwanga eYurophu ixesha elide, kusengqiqweni ukuba i-Samsung iqale Ukutyhala uhlaziyo lweNougat eUnited States . Ngoku bonke abathwali baseMelika bathumele uhlaziyo, i-Samsung ijolise ekuziseni i-Android 7.0 Nougat yeGalaxy Note 5 kwimimandla eyongezelelweyo.
Singaqinisekisa ukuba uhlaziyo luye lwavela eRomania, kodwa lunokufumaneka nakwamanye amazwe aseYurophu. Uhlaziyo lwe-Android 7.0 Nougat lubunzima kwi-1.3GB, ke qiniseka ukuba unendawo yokugcina eyaneleyo ngaphambi kokuzama ukuyikhuphela.
Kwakhona, ukuba usebenzisa i-Samsung Pay, kuya kufuneka uhlaziye usetyenziso kuhlobo lwamva nje ngaphambi kokufaka i-Android 7.0 Nougat Galaxy Note 5 . Ngaphandle kukaNougat, uhlaziyo longeza ukhuseleko luka-Matshi, elidala ngokujonga iGoogle sele ikhuphele imbalelwano uhlaziyo lokhuseleko lwenyanga kaMeyi .
I-Samsung Galaxy Qaphela i-5
Umahluko phakathi kwe-7 kunye ne-7s
I-iphone xs max iyabiza ngokukhawuleza
NgoLwesihlanu oMnyama ongaqhelekanga: IGlass yeNqaku le-10 litshiphu kunenqaku elidala le-9 eSamsung
Isikhokelo sakho kwimibala ye-iPhone 8: Isilivere vs iGolide vs iSpace Grey
La magama mabini anokugcina imali endaweni yee-AirPods kwiVenkile yeApple
Eyona misebenzi mihle yangoLwesihlanu oMnyama: Samsung, Apple, LG, Target, Best Buy, Walmart, T-Mobile, nangaphezulu (Ukuhlaziywa kwe-11/24)
Akukho glasi yeGorilla kwiPixel 3a. Yintoni iAsahi Dragontrail kwaye ngaba ifowuni yam iya kukrwela ngokulula?